Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Arimaha Ururka oo Howlo Muhiim Ah Wada.
Hogaanka Arimaha Ururka oo Howlo Muhiim Ah Wada.
Posted by Wariye Qaran	/ October 4, 2019
Tan iyo intii ay JWXO heshiiska lagashay dowlada Itoobiya waxaa gudaha Wadanka Ogadenia kabilowday howlo muhiim ah oo Abaabul iyo kobcinta garaadka halgamaaga isugu jirta.
Hogaanka Arimaha Ururka JWXO oo kamid ah hogaamada muhiimka ah ayaa qabtay siminaaro iyo tababaro lagu kobcinayo garaadka iyo hab maamulka Isla markaana lagu baranayay xeerarka JWXO iyo Taariikhda Ogadenia.
Agaasimaha Hogaanka Arimaha Ururka ee JWXO Halgame Liibaan Miyir Cabdi ayaa badhtamihii sanadkan Magaalada Qabridahare Kuqabtay tababar ay ka faa’iidaysteen dhowr boqol oo kamid ah dhalinta halganka unasab sheegata ee dagmada Qabridahare kudhaqan.
Xidhitaankii tababarkaas oo lagu bartay xeerarka JWXO, Khayraadka Wadanka iyo Taariikhda Ogadenia ayaa lagu casuumay madax sarsare oo uu kamid yahay Afhayeenka JWXO Halgame Cadaani Hirmooge, kaas oo ardaydii qalin jabisay gudoonsiiyay shahaadooyin.
Sidoo kale halgame Liibaan Miyir ayaa markale koorso halgameeda Allifle kabilaabay Dagmada Jigjiga ee Xarunta Gobolka Faafan, halkaas oo ay kasoo qayb galeen dhalinyaro aad utiro badan oo si hufan loobaray Taariikhda, Xeerarka JWXO iyo Khayraadka Wadanka Ogadenia.
Xaflad balaadhan oo looqabtay xidhitaanka Tababarka Dhalinyarada ee magaalada Jigjiga ayaa maalin nimadii shalay ahayd lagu qabtay Hoolka Sayidka ee Magaalada Jigjiga, waxaana Xaflada kasoo qayb galay madax sarsare oo uu hogaaminayay Kusimaha Gudoomiyaha JWXO Janaraal Cabdulaahi Mukhtaar.
Bahda Hogaanka Arimaha Ururka ee JWXO ayaa sheegay in ay tababaro lagu kobcinayo garaadka iyo aqoonta halganka ee Dhalinyarada kuqaban doonaan Gobolada Wadanka si loo helo hogaamin cusub oo dalka iyo dadku ay yeeshaan.